महिलाले ‘घरको काम’ गर्न छोडे के होला ?
एजेन्सी। चीनको एक अदालतले केहीअघि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो। अदालतले पाँच वर्षसम्म बिहेको क्रममा श्रीमतीले गरेको घरेलु कामको बदलामा श्रीमतीलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको दियो। यस्तो अवस्थामा महिलालाई ५.६५ लाख रुपैयाँ दिइनेछ।
तर यो निर्णयले चीन लगायत विश्वभर ठूलो बहस चर्किएको थियो। चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल साइटमा यस विषयमा मानिसहरूको मत विभाजित छ। घरायसी कामको बदलामा महिलाले कुनै पनि क्षतिपूर्ति पाउने हक छैन भनी कतिपयको विश्वास छ। त्यसै गरी महिलाले भविष्यको अवसर त्यागेर दिनहुँ घरायसी काम गर्दा क्षतिपूर्ति किन नपाउने भन्ने कतिपयको विश्वास छ।
त्यस्तै, जनवरीको सुरुमा, भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो फैसला सुनाएको थियो कि ‘घरको कामले वास्तविक रूपमा परिवारको आर्थिक स्थितिमा योगदान पुर्‍याउँछ र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउँछ।’ र यो पहिलो पटक होइन जब अदालतले (गृहकार्य)लाई आर्थिक गतिविधिको रूपमा अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। चीनदेखि भारतसम्म र पश्चिमी विश्वका देशसम्मका अदालतले महिलाले गरेको बेतलबी श्रमलाई आर्थिक उत्पादनका रूपमा स्थापित गर्दै बारम्बार फैसला सुनाउँदै आएका छन्।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि ‘घरको काम’लाई जिडिपीमा योगदानको रूपमा हेरिएको छैन। यति मात्र होइन, समाजले घरायसी कामलाई त्यति महत्त्व दिँदैन, जति जागिर वा व्यवसायमा गरेको कामलाई दिन्छ। यस्तो अवस्थामा महिलाले ‘घरको काम’ छाडेर जागिर वा व्यवसाय गर्न थाले भने के होला भन्ने प्रश्न उठ्छ।
घरको कामको अर्थ के हो ?
संसारका धेरैजसो महिलाले गृहिणीको हैसियतमा आफूले गरेको ‘होमवर्क’लाई पुरुषले गरेको कामलाई समाजले किन सम्मान दिँदैन भन्ने प्रश्नसँग संघर्ष गरिरहेका छन्। जबकि गृहिणीको हैसियतमा महिलाको कामको घण्टा पुरुषको कामको घण्टाभन्दा धेरै बढी छ। वर्षौंदेखि पत्रकारितासँगै कृतिका आफैँ पनि यही प्रश्नसँग संघर्ष गरिरहेकी छिन्।
उनी भन्छिन्, ‘घरको कामलाई मानिसले किन महत्त्व दिँदैनन् भन्ने मैले कहिल्यै बुझिन। घरायसी काम भनेको काम नै हुँदैन भन्ने मान्यता छ। घरको काम सजिलो छैन तर औषधि दिनुपर्छ, त्यो काम गर्नुपर्छ, खाना खानुपर्छ। समयमै तयारी गर्नुपर्छ भने बनाउनुपर्छ, यसमा राहत छैन।’
‘यसपछि साँझ कसलाई भोक लाग्यो भने उसको लागि पनि केही बनाउनुपर्छ। साँच्चै भन्ने हो भने, घरको काम गर्ने महिलालाई ‘अलादिनको बत्ती’ मानिन्छ। मसँग यसको यकिन रूपक छैन। सहयोगको माग भए पनि के गर्नुपर्छ भनिन्छ‘ आमाले गर्नुहुन्थ्यो, केही भन्नुभएन।
सहभागितामा ठूलो असमानता
तथ्यांक हेर्दा भारतमा पुरुषको तुलनामा महिलाले धेरै घरायसी काम गर्ने गरेको थाहा हुन्छ। पछिल्लो समय प्रयोग सर्वेक्षण अनुसार महिलाहरूले हरेक दिन घरायसी काममा (भुक्तानी नगर्ने घरायसी कामहरू) २९९ मिनेट खर्च गर्छन्। उही समयमा, भारतीय पुरुषहरू घरको काममा दिनको ९७ मिनेट मात्र खर्च गर्छन्।
यति मात्र होइन, यस सर्वेक्षणमा महिलाले घरका सदस्यहरूको हेरचाह गर्न दैनिक १३४ मिनेट खर्च गर्ने पनि खुलासा भएको छ। यो काममा पुरुषले ७६ मिनेट मात्र बिताउँछन्।
आर्थिक मूल्य निकाल्न गाह्रो ?
ध्यान दिएर हेर्ने हो भने हरेक कामको कुनै न कुनै मूल्य हुन्छ। त्यसो भए यो कसरी सम्भव छ कि महिलाले घरमा गरेको कामको आर्थिक मूल्य छैन ? कुनै पनि कामको मूल्यांकन गर्नको लागि त्यो कामको उचित मूल्यांकन हुनु आवश्यक हुन्छ। भुक्तान नगरिएको घरेलु श्रम अर्थात् महिलाले गर्ने घरको काम’ को मूल्य गणना गर्न तीन वटा सूत्रहरू उपलब्ध छन्।
– अवसर लागत विधि, – प्रतिस्थापन लागत विधि, – इन्पुट र आउट पुट लागत विधि
पहिलो सूत्र अनुसार महिलाले बाहिर गएर पनि घरायसी काम गरेर पचास हजार रुपैयाँ कमाउन सक्छिन् भने उनको कामको मूल्य पचास हजार रुपैयाँ मान्नुपर्छ। जबकि दोस्रो सूत्र अनुसार महिलाले गरेको ‘घरको काम’ को मूल्य ती सेवाका लागि भएको खर्चको आधारमा निर्धारण गरिन्छ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा महिलाको सट्टा घरमा अरू कसैले काम गरेमा उसको सेवा लिँदा सो महिलाले गरेको कामको मूल्य हुनेछ।
त्यसै गरी तेस्रो सूत्रमा महिलाले घरमा गरेको कामको बजार मूल्य गणना गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अक्सफामको अध्ययनअनुसार महिलाले गर्ने ‘घरको काम’को मूल्य भारतीय अर्थतन्त्रको ३.१ प्रतिशत रहेको छ। सन् २०१९ मा महिलाले गर्ने ‘घरेलु काम’को मूल्य १० ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी थियो। यो वाल मार्ट, एप्पल र अमेजन जस्ता फर्च्युन ग्लोबल ५०० सूचीमा रहेका ५० ठुला कम्पनीहरूको कुल आम्दानीभन्दा बढी थियो। यसपछि पनि गृहिणीको कामलाई आर्थिक सार्थकता दिन भारतीय अदालतले बारम्बार फैसला दिनुपरेको छ।
अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान
केहीअघि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो एउटा निर्णयमा भनेको थियो, ‘गृहिणीको आम्दानी निर्धारण गर्ने विषय धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसले सबै महिलाहरूको कामलाई मान्यता दिन्छ, चाहे विकल्पको रूपमा होस् वा सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताहरू विरुद्धको काममा संलग्न छन्। नतिजाको रूपमा गतिविधि। यसले समाजलाई ठुलो रूपमा सङ्केत गर्नेछ कि कानुन र अदालतले गृहिणीहरूको कडा परिश्रम, सेवा र त्यागको मूल्यमा विश्वास गर्दछ।’
‘यी गतिविधिहरूले परिवारको आर्थिक अवस्था र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने धारणाको मान्यता हो। परम्परागत रूपमा उनीहरूलाई आर्थिक विश्लेषणबाट वञ्चित गरिएको भए पनि। यो मानसिकताको प्रतीक हो र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दायित्वहरू र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो सामाजिक समानताको संवैधानिक दृष्टिकोण र सबै व्यक्तिहरूलाई जीवनको मर्यादा सुनिश्चित गर्ने दिशामा एक कदम हो।’
महिलाले गर्ने काम के हो ?
राम्ररी हेर्ने हो भने गृहिणीको रूपमा काम गर्दा महिलाले तीन वटा वर्गमा सेवा दिन्छन्। पहिलो वर्ग देशको आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने ज्येष्ठ नागरिक, दोस्रो वर्ग अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउने युवा र तेस्रोमा आगामी वर्षको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने बालबालिका रहेका छन्। प्राविधिक भाषामा यसलाई एब्स्ट्र्याक्ट लेबर भनिन्छ। यो कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न श्रमको पुनरुत्थानमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने श्रम हो।
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा महिलाले श्रीमानको लुगा धुनेदेखि लिएर खाने, पिउने, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य आदिको ख्याल राख्छिन् ताकि उनी अफिस जान सकुन्। उनले बच्चाहरूलाई सिकाउँछिन् ताकि तिनीहरू पछि देशको मानव संसाधनको हिस्सा बन्न सकुन्। देशको आर्थिक उन्नतिमा योगदान पुर्‍याउने आमाबुवा र सासु-ससुराको स्वास्थ्यको ख्याल राख्छिन्। अब यो सम्पूर्ण समीकरणबाट गृहिणीलाई हटाइयो भने सरकारले बाल कल्याण सेवा, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्न वृद्धाश्रम, बालबालिकाको स्याहारसुसारमा ठुलै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
महिलाले काम गर्न छोडे भने के हुन्छ ?
वर्तमानमा यो काम घरेलु कामदारले गरिरहेको छ, जुन मूलतः सरकारको काम हो किनभने नागरिकको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रको हो। यस्तो अवस्थामा महिलाले सित्तैमा सरकारी काम गर्न छोडे भने के होला ?
असंगठित क्षेत्र र श्रमिक विषयमा अध्ययनरत जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक अर्चना प्रसाद महिलाले घरायसी काम गर्न छोडेमा यो व्यवस्था पूर्णरुपमा ठप्प हुने विश्वास बताउँछन्। उनी भन्छिन्, ‘महिलाहरूले यी बेतलबी कामहरू गर्न बन्द गरे भने सम्पूर्ण प्रणाली नै ठप्प हुनेछ। किनभने महिलाको बेतलबी कामले प्रणालीलाई अनुदान दिन्छ। यदि सरकार वा कम्पनीहरूले घरको काम र हेरचाह गर्ने कामको खर्च बेहोर्छ भने, हामीसँग छ। यो गर्न, श्रमको मूल्य उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ।’
‘किनभने महिलाहरूले श्रम शक्तिलाई पुनर्जीवित गर्दै छन्। यसको ख्याल राख्दै। यसरी प्रत्येक पुरुषको श्रममा महिलाको बेतलबी श्रम समावेश छ। प्राविधिक भाषामा हामी यसलाई अमूर्त श्रम भन्छौं।’ अर्थशास्त्री, लेखक, र न्यूजिल्याण्ड राजनीतिज्ञ मार्लिन् वारिङ, जसले जन्ममा मा महिलाको घरेलु कामको योगदानको रूपमा वकालत गर्दछ, विश्वास गर्छिन् कि महिलाको गर्भधारण उत्पादनशील गतिविधि नभएसम्म जिडिपीमा गणना हुँदैन, जबकि यो भविष्यको मानव संसाधनको कारक हो। जन्म।
आफ्नो देशको उदाहरण दिँदै उनी भन्छिन्, ‘न्युजिल्यान्डको राष्ट्रिय खाता, जसबाट जिडिपीको तथ्यांक निकालिन्छ, त्यहाँ गाई, बाख्रा, भेडा र भैँसीको दूधको मूल्य हुन्छ, तर आमाको दूधको कुनै मूल्य हुँदैन, जबकि यो विश्वकै सबैभन्दा ठुलो दूध हो। सबै भन्दा राम्रो खाद्य वस्तु। यो बच्चाको स्वास्थ्य र शिक्षा मा सबै भन्दा राम्रो लगानी हो तर यसलाई गणना गरिएको छैन।’
‘परिवार अन्त्य हुनेछ’
महिलाले घरमा काम गर्न छोडेमा परिवार भनिने संस्थाको अन्त्य हुने प्राध्यापक हिर्वेको विश्वास छ। उनी भन्छिन्, ‘विकासको अर्थ सबैले आफ्नो मनको काम गर्न सकोस्। डाक्टर बन्न चाहने महिला डाक्टर बन्न सक्छिन्, इन्जिनियर बन्न चाहने महिला इन्जिनियर बन्न सक्छिन्।’
तर पुरुष प्रधान समाजले महिलामाथि घरायसी काम थोपेको छ । यसले खुट्टामा एक प्रकारको बन्धन लगाएको छ। पहिले घरायसी काम गरेर अरू काम गर्ने दबाब छ ।यदि काम गर्न छाड्यो भने पहिले। परिवार नामका सबै संस्था ध्वस्त हुनेछन्, यति मात्र होइन, निजी क्षेत्रदेखि सरकारी क्षेत्र आदिको काम पनि समाप्त हुनेछ। बेतलबी श्रमविना अर्थतन्त्र चल्न सक्दैन भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ।’
इन्द्रा नुईको उदाहरण दिँदै हिभ्रेले औपचारिक व्यापार प्रणालीमा महिलाको उत्कृष्ट प्रदर्शन भए पनि घरपरिवारको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी उनको रहेको बताइन्।
उनी भन्छिन्, ‘एक पटक इन्द्रा नुयीले सबै सुविधा भए पनि घर चलाउने जिम्मेवारी आफूले पाएको बताएकी थिइन्। उनले एउटा रोचक किस्सा सुनाइन्। एक पटक कम्पनीमा प्रमोसन भइन्। घर पुगेपछि उनले आफ्नी आमालाई ढोकामा भेट्टाइन्। कसले भन्यो जाऊ दूध ल्याऊ, तिम्रो श्रीमान् र छोराछोरीलाई बिहान दूध चाहिन्छ। इन्दिरा पहिले दूध लिन गइन् । त्यसको मतलब महिलाको काँधमा जिम्मेवारी आएको हो। कयौँ महिला सीईओले पनि यस्तो भनेका छन्। जति नै प्रगति भएन। हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक भएकोले यी कामबाट मुक्त हुन सक्दैनन्।’
इन्दिरा हिर्वेको विश्वास छ कि भारतले आफ्नो जिडिपीमा महिलाहरूले गरेको बेतलबी श्रमलाई समावेश गर्नुपर्छ। उनी भन्छिन्, ‘भारतीय मौद्रिक जिडिपीलाई अन्य देशसँग तुलना गर्नु गलत हो किनभने भारतमा महिलाले बेतलबी श्रम गरेर राष्ट्रिय आम्दानीमा पुर्‍याएको योगदानलाई जिडिपीमा गनिएको छैन भने विदेशमा त्यही काम पालनपोषण, पुरानो उमेर घर, नर्स, नानी आदि राष्ट्रिय आयमा समावेश छ।
समाधान के छ ?
अर्थतन्त्र र समाजमा पितृ सत्ताको प्रभावलाई कम गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ विश्वभरका धेरै महिला तथा पुरुषहरू ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन्। जागो रे आन्दोलन सञ्चालक कमला भसिन पहिलो लडाइँ पितृसत्तात्मक समाजबाट बाहिर निस्कने हो भन्ने विश्वास गर्छिन्। उनी भन्छिन्, ‘पुरुषलाई आफ्नो हुर्किरहेको छोरी वा छोरासँग जीवनभर बिताउने अधिकार किन छैन भन्ने प्रश्न किन सोध्नुहुन्न। उनीहरूलाई पढ्न, उनीहरूसँग खेल्न दिनुहोस्।’
‘पुरुषहरूले जे गर्छन् त्यो जीविका कमाउनको लागि जोगाड हो। यो जीवन होइन। श्रीमतीले जे गरिरहेकी छिन् त्यो जीवन हो। केही समय काम गरेनौ भने छोराछोरीको जीवनमा असर पर्दैन। श्रीमतीले एक दिन काम नगर्न सक्छन्।’ यदि गर्छौ भने जीवन मृत्युको प्रश्न उठ्छ। सोच्नुहोस्, आज महिलाहरूले भन्छन् कि या त हामीसँग राम्रो व्यवहार गर, नत्र हामी सन्तान जन्माउने छैनौँ। के हुने हो ? यस्तो हुनेछ कि सेनाहरू ठप्प हुनेछन्। जनशक्ति कहाँबाट ल्याउने ? तर, घरायसी कामलाई आर्थिक क्रियाकलापको दर्जा दिने लडाइँ धेरै लामो भएन भन्ने प्रश्न उठ्छ। -बीबीसी